Gbasara anyị - Szlightall Optoelectronics Co., Ltd.
Mgbazinye edu ngosi
Ime ụlọ pụtara ngosi
N'èzí mere ngosi
Ihe ngosi egwuregwu
Curved ada ngosi
Ime ụlọ na-eduzi ngosipụta mgbidi vidiyo
SZLIGHTALL to Optoelectronics Co., LTD. hiwere na 2013. isi ụlọ ọrụ ya dị na Shenzhen. Dika amara ya, Shenzhen bu nnukwu ulo oru ndi ozo, nke a bu uzo zuru oke nke ihe ngosi. Anyị bụ ndị a mba elu-tech enterprise nke na-elekwasị anya R & D, n'ichepụta, mkpọsa na-eje ozi nke Ikanam ngosi. Anyị nwere ebe anyị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Shenzhen, ebupularịrị ihe karịrị mba 100 n'ụwa, na ọtụtụ ọrụ dị iche iche na-aga nke ọma.
Mgbe afọ nke ịzụlite, anyị na-akwakọba ọgaranya ahụmahụ nke R & D na nwere mbụ na klas akpaghị aka mmepụta akụrụngwa, ọkọlọtọ ọcha akpaaka mmepụta osisi na mgbochi static usoro ngwaọrụ. O guzosie ike a productionhazi, ọkachamara mmepụta usoro nke ngosi, nke na-enye ihe dị irè nkwa na mma nke anụ àgwà na ngwaahịa na-eri irè anyị.
Ngwaahịa ahụ nwere ọkwa dị iche iche na nhazi dị iche iche, ngwaahịa ya na-ekpuchi ngosipụta agba agba zuru oke maka ime ụlọ na n'èzí, ngosipụta mgbasa ozi Ikanam, Ngosipụta ngosi ngosi, ngosipụta na-adịghị mma, ngosipụta nke ngagharị, ngosi ngosi egwuregwu ngosi, ngosi ngosi ozi okporo ụzọ, nke achịkwala ahịa ụlọ na nke mba na ụlọ ọrụ a.
Ugbu a, anyị nwere ihe karịrị 5000 ihe ịga nke ọma ikpe si n'akụkụ ụwa nile. Anyị na-emeri ntụkwasị obi nke ụdị mba ụwa ma pụta n'ọtụtụ asọmpi zuru ụwa ọnụ na mmemme mba ụwa, na-adọta ọtụtụ puku ndị ahịa. Anyị na-arapara na nkwenkwe ọrụ anyị: "ngwaahịa dị elu, teknụzụ dị elu, ọrụ dị elu". Anyị na-arapara n'ahụ ndị ahịa-centric ma na-eke na-adabere na ahịa 'ina, emeri nkwanye ùgwù na ntụkwasị obi. Ngwaahịa anyị butere ụzọ kwekọrọ na asambodo nke 3C, UL, TUV, EMC, CE, RoHS na ISO9001 ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ ahụ.
Companylọ ọrụ anyị nwere ezigbo ahịa, teknụzụ na ndị otu njikwa, ha bara ọgaranya nke ahụmahụ na nke a, ka anyị wee lekwasị anya na ngwaahịa R&D, nweta ngwaahịa ọhụrụ ma melite teknụzụ mgbe niile. Ndị otu ahụ bụ ọrụ awa 24 na ntanetị, dị njikere idozi nsogbu ọ bụla maka ndị ahịa. N'ihi ngwaahịa dị elu na ọnụ ahịa asọmpi, ngwọta ọkachamara na ọrụ dị mma mgbe a na-ere ahịa, Lightall Company na-enweta otuto dị elu site n'aka ndị ahịa n'ụwa niile. Otú ọ dị, anyị agaghị akwụsị; anyị ga-anọgide na-eweta ihe ọma ngwaahịa na ọrụ anyị ahịa. Anyị lekwasịrị anya na-edebe ogologo oge imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa.
Ime ụlọ mere video mgbidi Ngosipụta
Mgbazinye ada Display
Stadium gosipụtara Ngosiputa
Ọrụ dị n'ịntanetị